Ny Tilikambo Fiambenana | Desambra 2011
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kirghiz Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Zoloa
TOA misy resaka horohoron-tany na loza hafa foana amin’ny vaovao, ary mihamaro foana ny olona ianjadian’izy ireny. Milaza ny Foibem-pikarohan’i Belzika Momba ny Loza fa tamin’ny 2010 fotsiny, dia nisy 373 ny loza toy ireny ka olona 296 000, fara fahakeliny, no maty.
Voalaza koa fa nitombo be ny isan’ny loza tao anatin’ireo folo taona lasa. Teo anelanelan’ny 1975 sy 1999, ohatra, dia mbola latsaky ny 300 isan-taona ny loza voalaza fa nitranga. Teo anelanelan’ny 2000 sy 2010 anefa, dia efa ho 400 isan-taona izany. Mety hieritreritra àry ianao hoe: ‘Nahoana no be dia be ny loza ankehitriny?’
Milaza matetika ny olona fa “avy amin’Andriamanitra” izy ireny. Diso anefa izany. Tsy izy mihitsy no mahatonga ny loza manjo ny olona maro ankehitriny. Efa nilaza mialoha anefa ny Baiboly fa hisy loza amin’ny androntsika. Hoy, ohatra, i Jesosy: “Hisy mosary sy horohoron-tany any amin’ny toerana samy hafa. Izany rehetra izany no ho fiandohan’ny fahoriana.” (Matio 24:7, 8) Nahoana izy no nilaza izany, ary midika inona ho antsika ny fisian’ireny loza ireny?
Namaly an’ity fanontaniana ity i Jesosy tamin’izay: “Inona no ho famantarana ... ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity?” (Matio 24:3) Niresaka zavatra maro hitranga izy, anisan’izany ireo voalaza tetsy aloha ireo. Hoy izy avy eo: ‘Rehefa hitanareo fa mitranga izany zavatra izany, dia fantaro fa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra.’ (Lioka 21:31) Tena misy dikany lehibe ho antsika àry ny fisian’ireny loza ireny. Midika izy ireny fa hisy fiovana lehibe hitranga tsy ho ela.
Antony mahatonga ny loza
Olona maro anefa no mbola manontany ihany hoe: ‘Raha tsy Andriamanitra no mahatonga ny loza, dia iza?’ Tsy ho fantatsika ny valin’izany raha tsy ekentsika ity fahamarinana lehibe ity: ‘Izao tontolo izao manontolo dia eo ambany fahefan’ilay ratsy.’ (1 Jaona 5:19) Midika izany fa avy amin’ilay fahavalon’ Andriamanitra, dia “ilay ratsy” ny ankamaroan’ny fijaliana eran-tany. Antsoin’ny Baiboly hoe “Devoly” koa izy io.—Apokalypsy 12:9, 12.
Tia tena io fahavalon’Andriamanitra io ka heveriny ho tsy misy dikany ny olombelona. Izy no mifehy an’ity tontolo ity ka ampirisihiny hanana an’izany toe-tsaina izany koa ny olona. Efa nilaza mihitsy aza ny Baiboly fa “amin’ny andro farany”, ny olona dia “ho tia tena, ho tia vola, ho matin-kambo, hanambony tena.” (2 Timoty 3:1, 2) Tsy mahagaga àry raha ireo toetra ireo sy ny toetra ratsy hafa no mampiavaka an’ity tontolo ity. Ampirisihin’ny Devoly ho tia tena ny olona ka mitrandraka tafahoatra ny harena voajanahary. Izany matetika no mahatonga ny olon-kafa hiharan-doza.
Nahoana no mahatonga loza ny fitiavan-tena manjaka ankehitriny? Hoy ny tatitra nataon’ny Firenena Mikambana momba ny loza mitranga eran-tany: “Matetika ny mponina no mifanizina any amin’ny toerana mampidi-doza, toy ny any amin’ny faritra mora tondra-drano. Simba koa ny ala sy ny heniheny, ka hatahorana tsy hahavita hiaro amin’ny loza intsony ny tontolo iainana. Manampy trotraka an’izany ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny fisondrotan’ny ranomasina, noho ny fiparitahan’ny gazy manimba ... vokatry ny ataon’ny olombelona.” Lazaina fa hampandrosoana ny toe-karena ireny zavatra “ataon’ny olombelona” ireny. Fitiavan-tena anefa, raha ny marina, no mahatonga ny olona hanao azy ireny, ary tena miely eran-tany izany toe-tsaina izany.
Manam-pahaizana maro no miaiky fa mampitombo ny voka-dratsin’ny loza ny ataon’ny olombelona. Raha ny marina, dia manao izay tian’ny Devoly izy ireo, ka vao mainka mitombo ny loza.
Hitantsika àry fa vokatry ny ataon’ny olombelona ny ankamaroan’ny loza. Ny toerana nitrangan’izy ireny koa indraindray no vao mainka manampy trotraka ny voka-dratsiny. Any amin’ny tany maro, ohatra, dia voatery mipetraka any amin’ny faritra mampidi-doza ny ankamaroan’ny olona, noho ny olana ara-bola na ny saranga tsy mitovy. Ny ataon’ny olona ratsy fanahy sasany koa no vao maika mampitombo ny vokatry ny loza. Tsy voatery ho vokatry ny nataon’ny olona iray na ny tsy fitandremany anefa no mahatonga ny sasany hiharan-doza, fa mety ho noho ny ‘sampona amin’ny fotoana tsy ampoizina.’—Mpitoriteny 9:11.
Na inona na inona antony mahatonga ny loza, ahoana no hiatrehanao an’izany raha sendra an’izany ianao? Hodinihintsika izay azonao atao mba tsy hisy vokany be aminao izy ireny.
Fomba Hiatrehana ny Loza
Inona no tokony hataonao mba hiatrehana loza? Nahoana ianao no tena mila mifandray amin’Andriamanitra rehefa misy loza?
Hizara Hizara Nahoana no Be dia Be ny Loza?
w11 1/12 p. 4-5
MATOAN-DAHATSORATRA Manasazy Antsika ve Andriamanitra?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana no Be dia Be ny Loza?
MATOAN-DAHATSORATRA Fomba Hiatrehana ny Loza
MATOAN-DAHATSORATRA Tsy Hisy Intsony ny Loza!
Ho Potika ve ny Tany Amin’ny 2012?
Iza no Mahalaza ny Hevitry ny Faminaniana?
Fitsidihana Tany Ngazana Rakotra Lanezy
Ahoana no Hahaizana Mifidy Namana?
Ny Anaran’Andriamanitra sy ny Ezaka Nataon’i Alfonso de Zamora
“Misy Fotoana Itiavana ary Misy Fotoana Ankahalana”
“Masina, Masina, Masina i Jehovah”
Te Hitovy Tamin’ny Zanakavavin’i Jefta Aho
AMPIANARO NY ZANAKAO Nantsoina hoe “Zanaky ny Varatra” Izy Ireo
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Desambra 2011
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Desambra 2011
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Desambra 2011